Fampiasana menaka mandry Mety hankarary, hoy ny mpitsabo
Fihinanana odin-kankana Isan- telo volana ho an’ny zaza, isaky ny roa taona ho an’ny lehibe
Saika misafidy ny menaka mandry avokoa ny ankamaroan’ireo olona tonga mividy menaka eny an-tsena, raha ny fanadihadiana natao. Sady mora mantsy ny vidin’izy ireny amin’ny ankapobeny satria dia 4.000 Ar ny iray litatra no mitombo ihany koa rehefa hafanaina anaty lapoaly.
Mitombo 800 Ar amin’io kosa ny vidin’ny menaka tsy mandry iray litatra raha 6.000 Ar ny menaka anaty tavoahangy efa voafantina. Ireo mpanendy mofo sy mpivarotra hani-masaka amoron-dalana no tena mampiasa betsaka ity menaka mandry ity raha araka ny fanadihadiana natao hatrany raha efa misy mihitsy ny orinasa manokana mpamatsy ireo mpivarotra. Mety hankarary anefa izy ireny na dia mora sy mitombo aza, hoy i dokotera Ratafika. Any amin’ny fandevonan-kanina mihitsy no mety hisy olana ka mety hivalana ilay olona. Mikasika ny menaka mandry izay hampiasaina tsy mijanona, indrindra ho an’ireo mpanendy mofo na mpanao vary amin’anana mampiasa kitoza sy saosisy dia nomarihin’ity dokotera ity ihany koa fa mety hiteraka aretina hafa mihitsy ny fihinanana ireny karazan-tsakafo endasina amin’ny menaka mandry efa ela nanendasana tsy mitsahatra ireny. Anisan’ireny ohatra ny goitre. Anisan’ny mety hanampy ireo karazan’aretina azo vokatry ny fampiasana ity menaka mandry ity moa ny hafanana be loatra amin’izao ka ilana fitandremana tsara, hoy hatrany ny mpitsabo.